လက်ဝှေ့ကျော် ပက်ကွီအိုက ၂၀၂၂ ဖိလစ်ပိုင်ရွေးကောက်ပွဲအတွက် သမ္မတလောင်းအမည်စာရင်း တင်သွင်း - Xinhua News Agency
မနီလာ ၊ အောက်တိုဘာ ၁ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ လက်ဝှေ့အကျော်အမော် နှင့် ဆီးနိုတ်အမတ် မင်နီပက်ကွီအိုသည် လာမည့် ၂၀၂၂ ခုနှစ် မေလ၌ ကျင်းပမည့် ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ၎င်း၏ သမ္မတလောင်း အမည်စာရင်းတင်သွင်းမှုကို ယနေ့အောက်တိုဘာ ၁ ရက် (သောကြာနေ့) တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ဖိလစ်ပိုင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်လိုသည့် နိုင်ငံရေးသမားများအား အမည်စာရင်းတင်သွင်းခွင့် စတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်သဖြင့် အသက် ၄၂ နှစ်အရွယ်ရှိ ပက်ကွီအိုက ၎င်း၏ သမ္မတလောင်းအဖြစ် ပထမဆုံးအကြိမ် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန် အမည်စာရင်း သွားရောက် တင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“ ဆင်းရဲသားမိဘနှစ်ပါးမှ မွေးဖွားလာသော သားလေးတစ်ယောက်” ဟူ၍ ဖိလစ်ပိုင်ဘာသာဖြင့် ရေးသားထားသည့် ကြွေးကြော်ဆိုင်းဘုတ်နှင့်အတူ ပက်ကွီအိုသည် ၎င်း၏ ဇနီး ၊ ၎င်း၏ အနီးကပ်နိုင်ငံရေးမိတ်ဆွေ တစ်ဦးဖြစ်သည့် ဒုတိယသမ္မတလောင်းအဖြစ်ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ( ဒုတိယလွှတ်တော်ဥက္ကဌ နှင့် ယခင်မနီလာမြို့တော်ဝန်ဟောင်း) Lito Atienza တို့နှင့်အတူ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးသို့ ဘတ်စ်ကားတစ်စီးဖြင့်ရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“ သမ္မတအဖြစ် ဝင်အရွေးခံဖို့ ကျွန်တော့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ ကျွန်တော့်မိသားစုနဲ့ ကျွန်တော့်အတွက်သက်သက်မဟုတ်ပါဘူး ၊ တစ်နိုင်ငံလုံးအတွက်လည်း ဖြစ်ပါတယ် ။ ဖိလစ်ပိုင်လူမျိုးတွေကို တောက်ပတဲ့အနာဂတ်တစ်ခု ဆောင်ကြဉ်းပေးချင်ပါတယ်” ဟု ၎င်းက သမ္မတလောင်းအမည်စာရင်းတင်သွင်းပြီးနောက် သတင်းထောက်များအား ပြောကြားခဲ့သည်။
ပက်ကွီအိုက ၎င်း၏ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ကတိကဝတ်အဖြစ် အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေး နှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော ဖိလစ်ပိုင်များကို နိုမ့်ပါးသောလူမှုဘဝမှ လွတ်မြောက်ရန် စီးပွားရေးမြှင့်တင်ရေး လုပ်ဆောင်သွားမည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပြီး အကယ်၍ သမ္မတအဖြစ်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံရပါက လာဘ်စားသော အရာရှိများကို ထောင်ချအပြစ်ပေးသွားမည်ဟုလည်း ကတိပြုခဲ့သည်။
၎င်းအနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲကို အာရုံစိုက်လုပ်ဆောင်ရန် လက်ဝှေ့သမားဘဝမှ အနားယူကြောင်း ပြီးခဲ့သောဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ပက်ကီအိုက ထုတ်ဖော်ကြေညာခဲ့သည်။
ပက်ကီအိုသည် လက်ဝှေ့ပြိုင်ပွဲ ဝိတ်တန်း ၈ ခုတွင် အဓိကပြိုင်ပွဲ ၁၂ မျိုး၌ အနိုင်ရခဲ့သည့် တစ်ဦးတည်းသော လက်ဝှေ့သမားဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် lineal championship ပြိုင်ပွဲတွင် မတူညီသော ဝိတ်တန်း ၅ မျိုးတွင် အနိုင်ရခဲ့သည့် ပထမဆုံး လက်ဝှေ့သမားတစ်ဦးလည်း ဖြစ်သည်။
ပက်ကီအိုသည် စက်တင်ဘာ ၁၉ ရက်က ဖိလစ်ပိုင် PDP-Laban ပါတီ၏ သမ္မတလောင်း အဖြစ် အမည်စာရင်းတင်သွင်းမှုကို တရားဝင်လက်ခံခဲ့သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင် လွှတ်တော်အမတ် Christopher Go နှင့် လက်ရှိသမ္မတ ဒူတာတေးတို့က သမ္မတ နှင့် ဒုသမ္မတလောင်းများအဖြစ် အသီးသီး ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သွားမည်ဟု သိရသည်။
လာမည့်နှစ်ဇွန်လတွင် သမ္မတပထမသက်တမ်း ၆ နှစ် ကုန်ဆုံးမည့် ဒူတာတေးသည် အမည်စာရင်းတင်သွင်းမှုကိုလက်ခံခဲ့သော်လည်း Go က လက်ခံထားခြင်းမရှိပေ။ ဒူတာတေးသည် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ထံ ၎င်း၏ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း တင်သွင်းမှုကို မပြုလုပ်ရသေးကြောင်း သိရသည်။
လာမည့် ၂၀၂၂ ခုနှစ် မေလ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတ ၊ ဒုတိယသမ္မတ ၊ ဆီးနိုတ်အမတ် ၂၄ ဦး၏ ထက်ဝက် ၊ လွှတ်တော်အမတ်များ နှင့် အခြားသော ဒေသဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများကို မဲပေး၍ အသီးသီး ရွေးချယ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအားလုံးအတွက် အမည်စာရင်းတင်သွင်းမှုကို ယနေ့ အောက်တိုဘာ ၁ ရက်မှ အောက်တိုဘာ ၈ ရက်အထိ ကော်မရှင်က လက်ခံသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
#Pacquiao, #president, #candidacy, #xinhua, #xinhuamyanmar, #
MANILA, Oct. 1 (Xinhua) — Philippine boxing icon and Senator Manny Pacquiao on Friday officially filed his certificate of candidacy for president in the May 2022 elections.
The filing of the certificates of candidacy for all candidates opened on Friday until Oct. 8. Enditem
Manny Pacquiao of the Philippines celebrates after defeated Lucas Matthysse of Argentina for world welterweight champion title in Kuala Lumpur, Malaysia, July 15, 2018. Manny Pacquiao won Lucas Matthysse by technical knockout (TKO). (Xinhua/Chong Voon Chung)